SSL Security for Websites (Website တိုငျးအတှကျ SSL) | Myanmar Web Store
SSL ရဲ့ အရှည်ကတော့ Secure Socket Layerဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းထားပေးတဲ့ စံစနစ် ဖြစ်ပီးတော့ Server နဲ့ Client ကြားအရေးကြီးတဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေးပို့မှုကို ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှုမှ သော်လည်းကောင်း ပို့လိုက်တဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေကိုကြားဝင်ပီးပြင်ဆင်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Server နဲ့ Client ဆိုတာကတော့ ဉပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Website တစ်ခုခုနဲ့ Browser ပါ။ Server ကနေ Server လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ SSL က User နဲ့ Website အကြား ပေးပို့လိုက်တဲ့ ဒေတာတွေကို ကြားဝင်ဖတ်ရှုလို့မရအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ SSL က ဝှက်စာစနစ်နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Website နဲ့ Browser ကြားမှာ ပေးပို့တဲ့ ကူးပြောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံမှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
✅Websiteတစ်ခုမှာ SSL ပါမပါ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ??
Website တစ်ခုကို Browserကနေ ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ SSL ပါဝင်ပါက URL/ Link ရဲ့ရှေ့မှာ 🔒ဟု သော့ပုံလေး (သို့) https ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ SSLမပါဝင်ပါကBrowserမှတစ်ဆင့် URL/ Link ရဲ့ရှေ့မှာ Warningသင်္ကေတလေးပါဝင်တဲ့❗ Not Secure (သို့) http လို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Store မှအပ်နှံသော Website တိုင်းကိုလုံခြုံမှုရှိစေရန် SSL certificate ထည့်သွင်းပြုလုပ်ပေးပါသည်။
SSLဖြင့် Websiteတိုင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ Myanmar Web Store မှာ အခုပဲWebsiteအပ်နှံကြပါစို့။
မြန်မာနိုင်ငံရှိလုပ်ငန်းတိုင်း Website ရှိရမည်။
website design & development service in Mandalay
Our Facebook: Myanmar Web Store
Read – Ecommerce Website
SSL ရဲ့ အရှညျကတော့ Secure Socket Layer ဖွဈပါတယျ။
အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှုကိုလုံခွုံအောငျထိနျးထားပေးတဲ့ စံစနဈ ဖွဈပီးတော့ Server နဲ့ Client ကွားအရေးကွီးတဲ့ ထိလှယျရှလှယျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ပေးပို့မှုကို ကွားဝငျနှောငျ့ယှကျမှုမှ သျောလညျးကောငျး ပို့လိုကျတဲ့ ဒတောအခကျြအလကျတှကေိုကွားဝငျပီးပွငျဆငျခွငျးတှကေို ကာကှယျပေးထားတဲ့စနဈဖွဈပါတယျ။
Server နဲ့ Client ဆိုတာကတော့ ဉပမာအနနေဲ့ပွောရရငျ Website တဈခုခုနဲ့ Browser ပါ။ Server ကနေ Server လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ SSL က User နဲ့ Website အကွား ပေးပို့လိုကျတဲ့ ဒတောတှကေို ကွားဝငျဖတျရှုလို့မရအောငျ ပွုလုပျပေးပါတယျ။ SSL က ဝှကျစာစနဈနဲ့သှားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Website နဲ့ Browserကွားမှာ ပေးပို့တဲ့ ကူးပွောငျးတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို လုံခွုံမှုရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
✅Website တဈခုမှာ SSL ပါမပါ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ??
Website တဈခုကို Browser ကနေ ဝငျလိုကျတဲ့အခါမှာ SSL ပါဝငျပါက URL/ Link ရဲ့ရှမှေ့ာ 🔒ဟု သော့ပုံလေး (သို့) https ကိုတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ SSLမပါဝငျပါကBrowserမှတဈဆငျ့ URL/ Link ရဲ့ရှမှေ့ာ Warning သင်ျကတေလေးပါဝငျတဲ့❗Not Secure (သို့) http လို့ပွနမှောဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ Myanmar Web Store မှအပျနှံသော Website တိုငျးကိုလုံခွုံမှုရှိစရေနျ SSL certificate ထညျ့သှငျးပွုလုပျပေးပါသညျ။
SSL ဖွငျ့ Websiteတိုငျးလုံခွုံမှုရှိစဖေို့ Myanmar Web Store မှာ အခုပဲ Website အပျနှံကွပါစို့။
မွနျမာနိုငျငံရှိလုပျငနျးတိုငျး Website ရှိရမညျ။